Andiana 670 Dragon® Dredge - Dredge Ellicott
Ny dredge an'ny Series 670 Dragon® dia a portable suction dredge izay azo entina mora sy mivory eo an-toerana miaraka amin'ny ezaka kely indrindra. Ity dredge marobe ity dia mety ho an'ny tompona dredge voalohany na mpandraharaha mitady hividy sambo izay tsotra ampiasaina. Ny 670 dia matetika ampiasaina amin'ny tetikasa fivezivezena antonony amin'ny toerana toy ny seranana kely, renirano, ary tetikasa fampitrandrahana arabe anaty rano.
Naterina kamiao mora foana ny arabe.
Fampiasam-bola ambany ambany noho ny fiankinan-doha amin'ny fampiasana maharitra.
Mety tsara ho an'ny tompona voalohany sy mpandraharaha voalohany - mora zatra sy miasa.
Fiorenan-tany maharitra izay ahafahana mampiasa amin'ny rano voaaro semi.
Haben'ny famoahana: 14 ”x 14” (350 mm x 350 mm)
Caterpillar Standard Engine Engine C-18: 715 HP (533 kW)
Modely roa hisafidianana mifototra amin'ny halalin'ny dredging farany ambony takiana: 33 ′ (10 m) na 42 ′ (12.8 m)
Enclosure Engine azo fehezina ho an'ny fiarovana sy ny fanalefahana feo